Firefox 88 ichaita kuti Pinch to Zoom ishande muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 88 inogonesa Pinch to Zoom muLinux Wayland zvikamu
Anenge makore gumi nemana apfuura, Steve Jobs akashamisa nyika nefoni iyo, nepo ichokwadi kuti yaive nezvikanganiso zvakawanda, zvakare iri iyo yekumisikidza nzira yekutevera. Yaive iyo iPhone uye yaive yekutanga smartphone munhoroondo, ndokuti, smartphone iyo yakarerutsa zvinhu, senge kumisikidza kwayo uye kubhurawuza webhu. Pakati pezvaakaratidza, vazhinji vedu takaona kekutanga iyo Pinch yekutsikisa chiratidzo, zvinova ndizvo zvatinoita nekuparadzanisa / kuunza minwe yedu pamwechete kuti tikure / kudzikisa mufananidzo. Ichi chiito chinhu icho vashandisi veLinux vanogona kuita mairi Firefox 88.
Zvakare zvakare, Mozilla yakaita kuti tirambe takamirira. Uye ndezvekuti ivo vakawandisa nguva iyo iyo iyo gava kambani, senge anenge munhu wese, inopa kuda kune Windows uye macOS, sezvavakangoita nemusoro werima weAlpenglow, asi mune izvo zvaive zvichikonzerwa nebug iyo yavaive nayo kugadzirisa kwenguva yakareba. Basa racho rinowanikwa mumaapuro nemahwindo masisitimu kubvira Firefox 83, saka tinogona kushandisa iyo Vhinza kuti zoom inenge mwedzi mishanu gare gare. Inguva, asi kwete sekureba semamwe mabasa, nekuti WebRender haisati yasvika kumichina yeLinux yose.
Maitiro ekumisikidza Pinch kuti zoom pamberi peFirefox 88 isvike
Izvo zvitsva zvichauya, asi chete kune vashandisi vanoshandisa chikamu cheWayland. Basa racho rave riripo kwenguva yakareba, asi rakaremara, saka chero munhu anoda kuzviedza izvozvi muFirefox 87 kana yekutanga vhezheni anongofanira kuenda pamusoro: config, tsvagai mukova apzmumwe_kubata_pini.akwanise, tinya kaviri kuti uchinje kubva ku "nhema" kuenda ku "chokwadi" uye wotangazve bhurawuza.
Asi hei, ndinofanira kutaura kuti chiratidzo zvakanaka kana tikashandisa hombe uye inonzwisisika yekubata pani. Zvikasadaro, kunzwa kwacho hakusi kwakanyanya kunaka pasirese (kana kutosvika padyo nazvo), uye ini ndinotaura pane izvi nekuti ndakazviedza muWindows uye yangu diki uye ine husimbe yekubata padhi haisiyo yakanakira sarudzo yeizvi. Uye zvakare, isu tinogona zvakare kuswededza nekudzvanya Ctrl + Mouse Wheel / Mimwe minwe kumusoro kana pasi, iyo yandinofunga yakanyatsoita chaizvo.
Firefox 88 ichasvika musi waApril 20, uye zvakave zvakare zvakasimbiswa kuti Vashandisi veLinux vanogona kusarudza iyo Alpenglow theme uye voshandisa iro rima vhezheni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 88 inogonesa Pinch to Zoom muLinux Wayland zvikamu
Maziso Akachengeteka: inodzivirira kuora kwekuona nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwema skrini
Raspberry Pi OS yakagadziridzwa kune yayo Kurume vhezheni uye ikozvino inoshandisa Linux 5.10